Zakariye oo la wareegay Qaybta Sirdoonka, iyo Fadhiyadda Sirdoonadda Caalamiga ah ee Muqdisho oo xiriirka u jaray NISA. – Hornafrik Media Network
Zakariye Ismaaciil oo horay Alshabaab uga soo noqday Madaxa Sirdoonka Kooxda ayaa hadda isla xilkii uu ka hayay Alshabaab waxaa looga dhiibay Taliska Nabadsugidda iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliyeed, isagoo aan joogin 3 Sanno. Waxaana Zakariye oo Xilkan la hadlayay Maalmahan in loo magacaabay uu haatan si rasmiya ugala wareegay Taliyihii hore ee Qaybtaasi, C/fitaax Ziidii.
Warar ay heshay Hornafrik ayaa sheegaya in shalay si rasmiya loogu wareejiyay Zakariye Madaxa Qaybta Sirdoonka NISA, isagoo Maantana ku hawl billaabay Xafiiskiisa Cusub ee Xarunta Baarista NISA oo ku dhex taala Madaxtooyadda Somalia. Waxaana Shalay Xilwareejinta Zakariye iyo C/fitaax Ziidii goob joog ka ahaa qaar ka mida Taliye Xigeenadda NISA iyo Saraakiisha Qaybtaasi, iyadoo gabi ahaanba ay qaadaceen Xil wareejintaasi inay ka soo qayb galaan Fadhiyadda Sirdoonadda Caalamiga ah ee Muqdisho.
C/fitaax Ziidii oo Xilkan horay u hayay waxaa loo magacaabay Agaasimaha Xarunta Dhaqan Celinta Sariindi ee lagu hayo Dhalinyaradda ka soo goosatay Alshabaab oo ay maamulaan Hay’ado Caalami ah. Waxaana Ziidii uu gabi ahaanba shalay u gacan galiyay Xogtii iyo Documents kii Sirdoonka Somalia Madaxii hore ee Alshabaab u qaabilsanaa Sirdoonka, kadib markii ay sidaas amreen Taliyayaasha isaga ka sareeya.
Qaybta Sirdoonka ee loo magacaabay Zakariye ayaa ah Qayb Halbawle u ah Nabadsugidda Somalia. Waana halka laga maamulo Xogaha iyo Xuuraanka laga helo Kooxda Alshabaab, Waxay sidoo kale Qaybtan maamushaa Xabsiyadda Nabadsugidda, iyadoo go’aan ka gaaraysa Maxaabiista laga soo qabto Alshabaab, kuwa ay tahay in Sirdoonka Somalia ay ku shaqaystaan iyo kuwa aan bulshadda lagu sii dhex dayn karin, Waxaana Wel welka ugu badan laga qabaa in Zakariye uu Saaxiibadiisii hore ee Alshabaab siiyo Fursado aysan heli jirin isaga hortiis.